RW Kheyre oo maanta gaaray magaalada Doxa ee dalka Qatar. | Somsoon
Home WARAR RW Kheyre oo maanta gaaray magaalada Doxa ee dalka Qatar.
RW Kheyre oo maanta gaaray magaalada Doxa ee dalka Qatar.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa gaaray magaalada Doxa ee dalka Qatar, waana safarkii labaad oo muddo shan bil gudahood uu ku tago dalkaas.
Sida ay qortay Wakaalada Wararka Soomaaliyeed ee SONNA Ra’iisul Wasaaraha ayaa kulamo lagu xoojinaya xiriirka labada dal waxa uu la qaadan donaa madaxada dalkaasi Qatar oo uu ugu horeeyo boqorka dalkaas iyo golihiisa wasiirrada.
Qatar ayaa ka mid ah dowladaha sida weyn xilligan u taageera dowladda federaalka Soomaaliya uu hoggaamiyo Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo, iyadoo dhaqaale fara badan ku bixisa taageeridda dowladda Soomaliya.
Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa ka soo laabtay magaalada Baariis ee dalka Faransiiska, halkaas oo uu uga qeyb galay shirka Nabada Baariis, isagoo markii uu soo dhamaaday shirkaas u amba baxay dalka Beljim-ka oo uu kula kulmay madaxada cusub ee Midowga Yurub, waxa uuna kala hadlay nidaamka deyn cafinta Soomaliya iyo caawinta dowladda federaalka.
Article horeCiidamada ammaanka oo nolosha ku qabtay rag weeraray xarunta D/Deyniile
Article socoda Taliyaha Ciidanka Booliska oo maanta magacaabay Taliyaal ciidan